On1.click | ဆာရက်အင်း
... ဆာရက်အင်း သည် တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဂေါ်နို-ဘဒက်ရှန်ပြည်နယ်၊ ရူရွှန်ဒိ...
ဆာရက်အင်း (ယာ) နှင့် ရှဒေါင်ကန် (ဘယ်) တို့ကို ခြားထားသည့် အူဆိုင်ဆည်
38°12′06″N 72°45′27″E / 38.20167°N 72.75750°E / 38.20167; 72.75750ကိုဩဒိနိတ်: 38°12′06″N 72°45′27″E / 38.20167°N 72.75750°E / 38.20167; 72.75750
၇၅.၈ ကီလိုမီတာ (၄၇.၁ မိုင်)
၃.၃ ကီလိုမီတာ (၂.၁ မိုင်)
၇၉.၇ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၃၀.၈ စတုရန်းမိုင်)
၂၀၁.၈ မီတာ (၆၆၂ ပေ)
၅၀၅ မီတာ (၁,၆၅၇ ပေ)
၁၆.၀၇၄ ကီလိုကုဗမီတာ (၃.၈၅၆ ကုဗမိုင်)
၁၆၂ ကီလိုမီတာ (၁၀၁ မိုင်)
၃,၂၆၃ မီတာ (၁၀,၇၀၅ ပေ)
ဆာရက်အင်း (ရုရှား: Сарезское озеро တာဂျစ်: Сарез) သည် တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဂေါ်နို-ဘဒက်ရှန်ပြည်နယ်၊ ရူရွှန်ဒိစတြိတ်ရှိ အင်းတခု ဖြစ်သည်။ အလျား ၇၅.၈ ကီလိုမီတာ (၄၇.၁ မိုင်)၊ အနက် မီတာ ၁၀၀ ခန့်နှင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ ၃၂၆၃ မီတာ (၁၀၇၀၅ ပေ) အမြင့်တွင် ရှိသည်။ ရေထုမှာ ၁၆ ကုဗကီလိုမီတာ (၃.၈ ကုဗမိုင်) ဖြစ်သည်။ အင်းပတ်လည်ရှိ တောင်များမှာ အင်းရေပြင်အထက် ၂၃၀၀ မီတာ (၇၅၀၀ ပေ) မြင့်သည်။
၁၉၁၁ ခုတွင် ငလျင်ကြီးလှုပ်သည်နောက် မာဂက်မြစ်ကို ပြတ်ရွေ့ကြောက ပိတ်ကာ အင်းဖြစ်လာခြင်းတည်း။ ဤအင်းကိုပိတ်ကာ အူဆိုင်ဆည်ဟူ၍ တည်ထားသည်။ သို့သော် သိပ္ပံပညာရှင်များက အလားတူငလျင်မျိုး ဖြစ်ပါက ရေဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။ 
ရှဒေါင်အင်းသည် အူဆိုင်ဆည်၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင်ရှိသော အင်းငယ်တခုဖြစ်ပြီး ဆာရက်အင်း၏ အနောက်ဘက်တွင် ရှိသည်။ 
↑ Bolt, B.A., W.L. Horn, G.A. Macdonald and R.F. Scott, (1975) Geological hazards: earthquakes, tsunamis, volcanoes, avalanches, landslides, floods Springer-Verlag, New York.
↑ "Shadau Lake on 1:110'000 map"